Yesaia 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asɛm a wɔka kyerɛɛ Ɔhene Ahas (1-9)
Imanuel ho sɛnkyerɛnne (10-17)
Asoɔden so nsunsuanso (18-25)
7 Usia ba Yotam ba Ahas+ a ɔyɛ Yuda hene no bere so no, Siria hene Resin ne Remalia ba Peka+ a ɔyɛ Israel hene no bae sɛ wɔne Yerusalem rebɛko, nanso wɔantumi* anko amfa kurow no.+ 2 Na wɔbɛbɔɔ Dawid fi amanneɛ sɛ: “Siria ne Efraim aka wɔn ho abom.” Na Ahas koma ne ne man koma wosowee te sɛ kwae mu nnua a mframa rewosow no. 3 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Yesaia sɛ: “Mesrɛ wo, fi adi na wo ne wo ba Sear-Yasub*+ nkohyia Ahas wɔ baabi a atifi fam ɔtare no mu nsu nam no,+ ɔkwantempɔn a ɛkɔ ntamasifo asaase so no so. 4 Ka kyerɛ no sɛ, ‘Hwɛ yiye; mma biribiara nnhaw wo. Nsuro, na mma wo koma nntu, gyentia abien a epuw wusiw yi nti, Resin ne Siria ne Remalia ba+ no abufuhyew nti. 5 Efisɛ Siria ne Efraim ne Remalia ba no abɔ wo ho pɔw bɔne sɛ: 6 “Momma yɛnkɔ Yuda so nkɔtetew ne mu* na yɛnkɔko mfa,* na yensi Tabeel ba hene wɔ hɔ.”+ 7 “‘Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: “Ɛrenyɛ yiye,Na ɛremma so. 8 Siria ti ne Damasko,Na Damasko ti ne Resin. Aka mfe 65 pɛ,Wobebubu Efraim pasaa na ɛrenyɛ ɔman bio.+ 9 Efraim ti ne Samaria,+Na Samaria ti ne Remalia ba+ no. Sɛ moannya gyidi a ɛyɛ den a,Mo ase rentim.”’” 10 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Ahas sɛ: 11 “Bisa Yehowa wo Nyankopɔn na ɔmma wo sɛnkyerɛnne bi;+ ebetumi akɔ fam akodu Ɔdamoa* mu tɔnn anaa akɔ soro akodu wim mpo.” 12 Nanso Ahas kae sɛ: “Meremmisa, na merensɔ Yehowa nhwɛ.” 13 Ɛnna Yesaia kae sɛ: “Dawid fi, mesrɛ mo muntie. Enti nnipa abotare a moasɔ ahwɛ yi ara nnɔɔso anaa? Mopɛ sɛ mosɔ Onyankopɔn nso abotare hwɛ?+ 14 Ɛno nti, Yehowa ankasa bɛma mo sɛnkyerɛnne: Hwɛ! Ababaa* no benyinsɛn awo ɔbabarima+ na wato no din Imanuel.*+ 15 Bere a obehu sɛnea wɔpo bɔne na wɔpaw papa no, na odi bɔta ne ɛwo. 16 Ansa na abarimaa no behu sɛnea wɔpo bɔne na wɔpaw papa no, na wɔagyaw ahemfo baanu a musuro wɔn yi asaase ato hɔ a obiara rentena so.+ 17 Yehowa de nna bi bɛba wo so, ne wo manfo so, ne w’agya fi so. Efi bere a Efraim tew ne ho fii Yuda ho+ no, ebi mmae saa da, efisɛ Onyankopɔn de Asiria hene bɛba.+ 18 “Na saa da no, Yehowa bɛbɔ hwirema afrɛ nwansena a wɔwɔ Egypt Nil asuasu* ano noho ne nnowa a wɔwɔ Asiria asaase so no. 19 Wɔn nyinaa bɛba abesisi nsubon a emu dɔ ne abotan mu ntokuru mu ne nsɔe so ne mmeae a nsu wɔ nyinaa. 20 “Saa da no, Yehowa de oyiwan a wɔabɔ no paa afi Asubɔnten no* ho, kyerɛ sɛ Asiria hene,+ beyi ti ne nan ho nwi, na ɔde awerɛw abogyesɛ nso. 21 “Ɛda no, onipa bɛkora nantwi ba baako ne nguan abien so. 22 Na nufusu a ebebu so nti, obedi bɔta, efisɛ obiara a waka asaase no so bedi bɔta ne ɛwo. 23 “Saa da no, baabi a na bobe 1,000 a ne bo yɛ nnwetɛbona 1,000 wɔ no, ɛhɔ bɛdan nsɔe ne nwura nko ara. 24 Nnipa de bɛmma ne agyan bɛkɔ hɔ, efisɛ asaase no nyinaa bɛdan nsɔe ne nwura. 25 Na mmepɔw a kan no na wɔde asɔw dɔw so nyinaa no, worenkɔ hɔ bio, nsɔe ne nwura nti; na ɛhɔ bɛdan anantwi adidibea, na nguan adi hɔ aforosian.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wantumi.”
^ Ɛkyerɛ, “Nkaefo Kakraa Bi Na Wɔbɛsan Aba.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nkohunahuna no.”
^ Anaa “yenkobu n’afasu ngu mu.” Nt., “yɛnkɔpae mu.”
^ Ɛkyerɛ, “Onyankopɔn Ne Yɛn Wɔ Hɔ.”
^ Anaa “nsuwansuwa.”